रक्षा को अमेरिकी विभाग: के, जो पूर्वसूचना जहाँ
सबै अमेरिकी सशस्त्र शक्ति र invincibility बारेमा सुने। अमेरिकी रक्षा विभाग देश को राजनीतिक र प्रादेशिक सुरक्षा, साथै नीति बनाउने र अमेरिकी सरकार सबै एजेन्सीहरू को व्यवस्थापन को समन्वय प्रदान मा लगी भएको छ।
शिक्षा को इतिहास
दोस्रो विश्व युद्ध को अन्त अघि एक वर्ष, अमेरिकी कांग्रेस सशस्त्र सेना को गतिविधिहरु समन्वय गर्न एक शरीर को स्थापना प्रस्तावित गरेको छ। एक वर्ष पछि, संयुक्त राज्य अमेरिका र कर्मचारी को संयुक्त प्रमुखों को नौसेना सेना को एक सभामा म यस्तो संरचना सिर्जना गर्न योजना विकास गर्न थाले। 20 औं शताब्दीको दोस्रो क्वाटरमा भर, 1949 सम्म रक्षा को अमेरिकी विभाग को एक शरीर फारम परियोजना को कार्यान्वयन मा, संशोधन गरिएको थियो। धेरै नै सेवकाईमा विभिन्न सैन्य सेना को कमान्डरहरु ध्यान गर्न पनि खतरनाक थियो कि विरोध गर्ने बहस, विरोध गरेका थिए। सुरुमा यो ", राष्ट्रीय रक्षा मन्त्रालय" को भनिन्थ्यो तर पछि रक्षा विभाग पुन: नामाकरण गरिएको थियो।
एजेन्सी विभाग रक्षा को लागि खडा छ जो DOD, भनिन्छ। sobe मा भूमि, हावा, amphibious र नौसेना सेना जोडती। बुद्धि एजेन्सी र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी पनि मन्त्रालयले गर्न अधीनस्थ छन्।
मुम्बई मुख्यालय DOD'a को पेन्टागन मा स्थित छ, Arlington काउन्टी, भर्जिनिया। यो, वाशिंगटन नजिक सही पक्षमा छ को पोटोम्याक नदी को।
यो दिन मा पेन्टागन को टाउको उत्पत्ति Dzheyms Mettis, उपनाम छ "पागल कुकुर।" कि यो स्थिति डोनाल्ड आवारा लागि नामांकित भएको थियो।
वर्तमान समयमा पेन्टागन गरेको सिस्टम निम्न घटक समावेश छन्:
रक्षा को मन्त्री को केन्द्रीय कार्यालय;
तीन सैन्य सेना मंत्रालय को;
कर्मचारी र संयुक्त कर्मचारी को प्रमुखों;
18 नियन्त्रण केन्द्रीय पेश्की;
9 सेवाहरू र सुविधाहरु;
अमेरिकी सशस्त्र सेना को9संयुक्त आदेश।
साथै, रक्षा मंत्रालय निर्देशन वा माथि-उल्लेख पूर्ण सैन्य अधिकारीहरु को नियन्त्रणमा कार्य सबै संगठन छ।
2011 को लागि, रक्षा मंत्रालय को बजेट बारे 708 अर्ब डलर, अमेरिकी जीडीपी को बारेमा 4.7% छ जो थियो। हाल रिपोर्ट अनुसार, अमेरिकी सैनिक स्थापना को वित्तीय गतिविधिहरु गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ।
रक्षा को 2016 आधार बजेट अमेरिकी विभाग 534 अर्ब बनाएको छ। कागजात अनुसार, नौसेना को आवश्यकता बारे 161 अर्ब छोड्न हुनेछ, र वायु सेना 153 अर्ब आवंटित गर्नेछ। सेना को लागि - 126,5 अरब। यी सबै संख्याले मा 2015 10 अर्ब औसत मूल्य भन्दा उच्च हो।
178 अर्ब डलर, गत वर्ष भन्दा 20 अर्ब कम छ, विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाका र सैन्य आपूर्ति मा बिताए। बजेट, रहस्य भनिन्छ जो अर्को भाग, प्रकाशित छैन।
त्यहाँ अमेरिकी उपस्थिति सैनिक सञ्चालनका वर्तमान थिएटर, एक $ 51 अर्ब (2016) को "appendage" को लागि प्रदान मा देखि। को "appendage" को सबै भन्दा कम पट्टी 2001 देखि रेकर्ड भएको थियो। सबै पैसा सञ्चालन गर्न गए विरोधी आतंकवादी सञ्चालन अफगानिस्तान मा। अफगानिस्तान देखि आफ्नो सेना को निकासी संग, सैन्य खर्च कम गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका। तर, यो बावजुद, धन विदेशी अपरेसन सञ्चालन गर्न जाँदै को बहुमत, बन्द बस अफगानिस्तान मा लेखिएको।
रक्षा उपलब्धीहरू को अमेरिकी विभाग
उत्पादन र बोर्ड मा उनलाई फिर्ता लिन, को drones बोक्न सक्षम हुने सैन्य विमान को विकास, दोस्रो चरण सारियो। रक्षा मंत्रालय दुई चिरपरिचित अमेरिकी कम्पनीहरु, विमान निर्माण संग अनुबंध हस्ताक्षर भएको छ। यी विमान नाम निर्णय थियो "स्वर्गीय विमान वाहक।"
पहिलो चरणमा डिजाइन र विमान को डिजाइन क्षमताहरु ईन्जिनियर थियो। दोस्रो चरण मा यो मोडेल परीक्षण गर्न योजना छ। तेस्रो सेवा दुई नव विकास मोडेल हालिदिए शामिल।
त्यस्तो हतियार प्रयोग विचार अनुसार अमेरिकी वायु सेना, शत्रु हावा प्रतिरक्षाको संग प्रभावकारी सामना गर्न जमीन लक्ष्य नष्ट र फौजको जाचबुभ्क पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
छैन लामो पहिले, रक्षा को अमेरिकी विभाग देशको एयरोस्पेस उद्योग भारी रूस प्रभावित छ भनेर स्वीकार्नुभयो। तथ्यलाई कुनै खरीद रूसी रकेट इन्जिन आरडी-180 आधिकारिक अमेरिकी सरकार घोषणा गरिएको छ, सैन्य उपग्रहहरु कक्षा चलान गर्न बस केही हुनेछ।
सीनेटर Dzhon Makkleyn, रूसी निर्माण को रकेट इन्जिन, देश को राष्ट्रिय सुरक्षा रूस निर्भर गर्दैन नत्याग्ने रूसी माग विरुद्ध प्रतिबंध को एक प्रबल समर्थक। रूसी इन्जिन को आपूर्ति अमेरिकी कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा गर्न अवरोध छ कि दृश्य को McClain प्रेरकों। एकै समयमा, सीनेटर रिचर्ड शेल्बी 2009 मा जो, यसो कागजात, संशोधन "रकेट मिडिया प्रयोग गरिन्छ कि इन्जिन देशहरूमा उत्पादन को विकल्प को स्वतन्त्रता।" यो पेन्टागन अमेरिकी रकेट इन्जिन सिर्जना मा निवेश छ कि कारण थियो।
क्षणमा, त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा rocketry को क्षेत्र मा प्रगति कुनै सही डाटा छ।
2008 मा, संयुक्त राज्य अमेरिका को असम्भव व्यवस्थित। रक्षा को अमेरिकी विभाग र सैन्य प्रविधिको मद्दत संग द्वारा orbiting जासूस उपग्रह अमेरिका-193 हिट भएको थियो।
यो एउटा उदाहरण दिन गाह्रो छ कसरी बुझ्न। पृथ्वी एक टेनिस 7.3 मी / s को एक गति मा गुजर जो, अर्को बल मारा बराबर छ, र निरन्तर trajectory परिवर्तन छ वरिपरि कक्षा मा एक उपग्रह तल गोली। यस्तो शल्य चिकित्सा हडताल लागि दोस्रो उडान बाटो समन्वय को एक अंश सक्षम एक Warhead आवश्यक छ।
यस कार्यका माथि बारेमा 200 विशेषज्ञहरु रोजगारी प्रदान गर्दछ। कुल3परिमार्जन SM-3 मिसाइल तयार भएको थियो। यदि पहिलो प्रयास असफल भयो, यो अर्को दुई warheads सुरु गर्न सम्भव रह्यो। एक यस्तो मिसाइल खर्च लाख $ 10।
हालै चीन यस्तै प्रविधि प्रदर्शन गरेको छ।
त्यहाँ रक्षा को अमेरिकी विभाग को गोप्य विकास रोजगार जानकारी छ। यो एक जटिल को सन्दर्भ मा उल्लेख "कृत्रिम बुद्धि प्रयोग संग इलेक्ट्रनिक र cybernetic प्रणाली।" यो पेन्टागन रबर्ट Wark को उप टाउको द्वारा यसो भएको थियो। जबकि रूसी र चिनियाँ आणविक हतियार सुधार, अमेरिका को "गैर-आणविक" युद्ध गर्न लाभ कुरा।
1983 मा फिर्ता, राष्ट्रपति रोनाल्ड Reagan "सामरिक रक्षा पहल" हकदार एक दीर्घकालीन कार्यक्रम को शुरुवात घोषणा। यो कार्यक्रम उत्तरी अमेरिका भर अवसर आक्रमण सम्भावित शत्रु पराजित हुनेछ जो अन्तरिक्ष रक्षा र हडताल प्रणाली को एक प्रयोग गरेर चाहनुभएको छ।
यो विकासकर्ताले केही सैन्य युद्धमा ठाउँ पराबैंगनीकिरण, तटस्थ कणहरु र कक्षीय दर्पण को emitters द्वारा संलग्न छन् कि यसो भएको थियो। क्षणमा त्यहाँ एक परियोजना महसुस हुनेछ जो एक प्राविधिक मोडेल, छ। कुनै रक्षा मंत्रालय को कुनै पनि अमेरिकी अख्तियार, यी परियोजनाका लागि जिम्मेवार छ रूपमा।
रूस मा भ्याट
पेंशनरहरुलाई गर्न मुख्य कर लाभ। कम कसरी तिर्न?
एकपक्षीय कार्य को दायित्व: एक इनाम को सार्वजनिक प्रतिज्ञा, एक सार्वजनिक प्रतियोगिता, खेल र सट्टेबाजी
रूसी संघ मा अभिभावकको अधिकार समापन लागि आधार
न्यायको सिद्धान्त, आफ्नो प्रकृति र वर्गीकरण
छोडपत्र लागि कसरी लागू गर्ने? विस्तृत अल्गोरिदम
Bookmaker Sportingbet: समीक्षा। Sportingbet: दर
Viktor Koreshkov (अभिनेता): जीवनी, फिलिम क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
Uvinskaya jewel - स्वास्थ्य लाभ!
वजन ectomorph मा पोषण र व्यायाम कार्यक्रम
बाढीले कसरी खेल्न सक्छ? शुरुवातका लागि मुख्य नियम
विनिमय मूल्य र यसको सार
को "Sviaz-2016" के छ
मुद्राकार जो कम्पनी को लागि नलिका किन्न राम्रो छ? फारामहरू र Carver लागि नलिका को प्रकार